समृद्ध नेपालको सपना देखेर अपराध गरेनौं : प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले समृद्ध नेपालको सपना देखेर अपराधन नगरेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना मैले देखें, हामीहरुले देख्यौं– अपराध गरेनौं । सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएकोले देखेको त्यही भिजन लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु मेरो कर्तव्य थियो, मेरो नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्दैछ । सुखद् परिणामको उपभोग हामी सबै मिली गर्ने हो ।’
उनले राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने भन्दा अरु ‘स्वार्थ’ नरहेको प्रष्ट पारे ।
यस्तो छ २०७५ पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभामा गरिएको सम्बोधन :
अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दे त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु हो । त्यसको लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवश्यक छ ।
हामी अहिले यस आर्थिक बर्षको सरकारको नीति/कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा छौं । सरकार आफ्नो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो । सूचकहरुकै आधारमा नीति÷कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वन सहि छ या गलत, त्यसको टुङ्गो लाग्ने हो ।
त्यसैले यस सरकारले, यसबर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो। यस्तो संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानून, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तिमा पनि पाँच पक्षमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक थियो ।
कानूनी पुनःसंरचनाका २ सीमा र २ पक्ष थिए । पहिलो संवैधानिक सीमा थियो– गत असोज ३ गते अगावै संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्ने । दोस्रो सीमा आगामी फागुन २१ भित्र संघीयता अनुकुल नभएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने ।
प्रतिपक्षको तर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– ‘कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छ ? गर्न खोजेको के हो ? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको?” म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकाशको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावश्यक ५०/६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पर्‍थ्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पर्‍थ्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमति कै आधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा ‘पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने’ रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।
पहिलोचोटी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकोले बजेट र लेखा प्रणाली बुझ्न र बुझाउन केही अलमल जस्तो देखिए पनि अब यसले आफ्नो मार्ग पहिल्याएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि मैले राजश्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पूँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात÷निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत, प्लागशिप कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई ७ वटा सूचकको रुपमा लिएको छु ।
गतवर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको छ । गतबर्षको मूल्य बृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो, यस बर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र छ ।
गत आर्थिक बर्षको यसै अवधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ। बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४.६ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ ।
प्लागशिप कार्यक्रमहरु मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रगति स्वभाविक र सकारात्मक छ । यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा यस आर्थिक वर्षको शुरुवातमा थालिएको ‘एक नेपाली, एक फलफुलको विरुवा’ रोप्ने अभियान अन्तरगत विभिन्न जातका २३ लाख भन्दा बढी विरुवा रोपिएको छ ।
पशु वीमा कार्यक्रमको प्रिमियम बापत नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गर्ने ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वीमा कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
साना किसानहरुको साँवा र व्याज समेत गरी रु. १ अर्ब ३२ करोडको ऋण मिनाह गरिएको छ ।
३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको बबई सिंचाई आयोजनाबाट हालसम्म २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई व्यवस्था भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रफ्तारमा अघि बढिरहेको समयमा केही समस्या आएको छ, हल गर्ने प्रयास जारी छ ।
काठमाडौ–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रगति उत्साहबर्धक छ ।
मैले भइरहेका कामको सांकेतिक जानकारी मात्र यो सम्मानित सदनमा चर्चा गरेको हुँ । बनेका नियमावली, सफ्टवेयर, एप आदिलाई मैले आवश्यक र स्वाभाविक कामको रुपमा लिने गरेकोले यी विषयहरुमा चर्चा गरिरहन आवश्यक ठानेको छैन । सफ्टवेयरको तयारी र ‘गो–डिजिटल वे’ मा प्रगति भएका छन्, हुँदैछन् । हाम्रा सम्पूर्ण सूचनाहरुको एकीकरण गर्ने र मुलुक र आप्mना नागरिकहरुको जानकारीको गोप्यता सरकारको सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित गर्ने कार्य भइरहेको छ । कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको छ । यसलाई अटोमेशन, वेव पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाईंदैछ । प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको छ ।
तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्य वङ्ग्याउने, तथ्य विपरित प्रश्न उठाउने र सरकारका प्रत्येक कामलाई संशयको घेरामा तानी जनमानसमा भ्रम र द्वैष पैदा गर्ने उपक्रम देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख दुवै लागेको छ । यस्तो विषयमा अनावश्यक बहकिनु उपयुक्त हैन ।
यो उपलब्धि मेरो एक्लो वा मेरो दलको मात्रै भनेर मैले कही भनें ? यस आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम यस सदनले सर्वसम्मतीले पारित गर्‍यो । त्यसैमा उललेख भए बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू हुँदा त्यसको जस सिङ्गो सदनले पाउनु पर्छ । यसको श्रेय सबै मिली लिऊँ ।
तीन करोडको रुपैंयाको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । उनीहरुको पारिश्रमिक निजी वैंक खातामा जम्मा हुने नयाँ व्यवस्था शुरु गरिएको छ ।
साथीहरुले भन्नुभयो– खै काम गरेको ? सरकार देखिएन । न्याय भेटिएन । त्यसैले, चौतर्फी आक्रमणबीच मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेका थोरै कामको चर्चासम्म गरेको हुँ ।
यो सरकार गठन भएपश्चात थप ३० हजार ग्राहक कहाँ विद्युतीय मिटर जडान भएको छ । यस अवधिमा विद्युत चुहावटमा ३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यस अवधिमा १० हजार ५ सय ६१ घर परिवारमा बायोग्यास प्लान्ट, ८० हजार ९ सय ९० वटा सौर्य विद्युत प्रणाली र ४० हजार ३ सय ६२ वटा सुधारिएको चुलो जडान गरी विद्युत सेवा तथा स्वच्छ उर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा बैंककिङ् सम्बन्धि निर्देशिकामा सहमति भएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले आफ्नो ऊर्जा आदानप्रदान निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ ।
नेपाल र बंगलादेश सरकारबीच विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग चारलेनमा स्तरोन्नति गर्न स्रोत सुनिश्चित भएको छ र केही खण्डमा बोलपत्र आव्हान समेत भइसकेको छ ।
भूकम्पपछि बन्द रहेको कोदारी राजमार्ग आगामी वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।
रसुवागढी–गल्छी सडकको स्तरोन्नति तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल देशभर १२५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चिनियाँ सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ र यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता हुँदैछ ।
भारत र चीनमा भएको मेरो औपचारिक भ्रमण र त्यसको उपलव्धी बारे मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराई सकेको छु । यसबीच मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गरेको छु । न्युयोर्कमा साइडलाइन मिटिङ्गको रुपमा स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रपति, क्यानडा, वेलायत र कम्वोडियाका प्रधानमन्त्रीसंग भेटवार्ता भएको छ ।
कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमण गरेको छु । र, संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सिटी फर पीसले मलाई मानार्थ विद्यावारिधीबाट सम्मान गरेको छ । यो हामीले शान्ति स्थापनामा खेलेको भूमिकाको मान्यता हो । यो सम्मान, मेरो व्यक्तिगत सम्मान नभई म मार्फत नेपाली जनताले शान्ति स्थापना पु¥याएको योगदान र सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकाको समेत सम्मान हो ।
ही माघ महिनाको पहिलो साता म डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी हुँदैछु । पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यस मञ्चमा औपचारिक आमन्त्रण गरिनुलाई मैले हाम्रो लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रामा अन्तराष्ट्रिय मान्यताको रुपमा लिएको छु ।
शिक्षामा, मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलले काम गरीरहेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आप्mनो कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यद्यपि यस सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षामा नीजि क्षेत्रको सहभागिता हुनै नहुने र विद्यालय शिक्षामा नीजि क्षेत्र नभै नहुने जस्ता अनौठा विरोधाभाष प्रकट भइरहेको छ ।
यस सम्मानित सदनमा यस अघि नै विद्यार्थी धर्ना अभियान र त्यसमा प्राप्त सफलताको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु ।
आगामी वर्ष मुलुकलाई पूर्णतः साक्षर मुलुकमा रुपान्तरण गर्नेगरी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदछु ।
अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । केही घटना अपवादको रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार सक्रिय छ । अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र उल्लेख्य सफलतालाई ओझेल पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुचित प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ।
यस अवधिमा ४२ के.जी. ८४१ ग्राम अवैध सुन, १५२ थान अवैध हतियार, २८३ राउण्ड गोली र १५० जना संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका २० जिल्लामा हिमपात हुँदा हुने चिसोको प्रकोपबाट अति विपन्न परिवारलाई बचाउन ५/५ लाख रुपैयाँ निकाशा दिइएको छ । शीतलहर र आगलागिका घटनामा परेका विभिन्न जिल्लाका पीडित परिवारलाई करिब ६ हजार थान राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
अहिले हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लामो संघर्षपछिको उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममा छौं । कुनै समय विपक्ष दलका नेता सत्तापक्षमा रहँदा राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भन्नु भएको म अहिले पनि स्मरण गरिरहेको छु– ‘राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन । राष्ट्रपतिले गरेको काम मैले गरेको हो ।’
संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन । केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन । जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गण्तन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझी रहेका छैनौं ?
विवादमा ल्याइएको शितल निवास सम्बन्धि हरेक निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले हैन । यस संस्थाको गरिमाकालागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावस्यक ढोंग वा दरिद्रता प्रदर्शित गरिरहनु पनि आवस्यक छैन ।
प्रहरी तालिम केन्द्र सम्बन्धी निर्णय पनि आजको हैन, धेरै अघिको हो । त्यतिखेर स्थान अभावको दाबीसहित ‘मध्य–शहरमा रहेको तालिम केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने’ निर्णय गर्नेहरुबाटै अहिले अन्यथा टिप्पणी सुन्दा टिठ लाग्छ ।
संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध विष–वमन हुँदा कसैकसैले त्यसैमा स्वाद मान्यौं । आज त्यो ‘तिर’, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । कुनैसमय रक्तअल्पताको औषधि सेवन गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै सुत्केरीको औषधी खायो, पुरुष सांसद सुत्केरी भयो भन्ने अनाहकमा अफवाह फैलाईयो । त्यस्ता हरकतबाट संसद कति बद्नाम भयो र अतिवादलाई कसरी मलजल गर्‍ यो ? त्यस्ता हरकत, असोज १८ र माघ १९ को तयारी थियो भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट नै छौं । अहिले, सबै सांसदहरुलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै, चालक तथा नीजि सहयोगीको भत्ता समेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचार प्रसार भइरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होश गरौं ।
हाम्रो संसद सचिवालयले होस नपुर्‍याई कुनै त्रुटी भएको भए सजग होउँ, सच्याउँ । जानी नजानी हामी मध्ये कोही कसैबाट कमी भएको छ भने सच्चिउँ । एउटाले बिराउँदा सिङ्गो संस्था बदनाम हुनेमा सचेत होऔं । ‘घुँडा चुसेर” अघाइन्न भन्ने लोकोक्ति स्मरण गरौं । व्यक्ति त आउँछन् जान्छन्, संस्थाको साख र मर्यादामाथि आँच आए हाम्रो लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । आँच आउन नदिउँ, पुरानो घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिऊँ, जोगाऊँ ।
निःसन्देह हामी समृद्धिको अभियानमा छौं । समृद्धिको लागि अघि सारिएको यो राष्ट्रिय यात्रामा, सबैलाई सक्रिय सहभागी हुन म आव्हान गर्दछु । हाम्रो प्रतिपक्ष कसरी सहभागी हुन चाहन्छ, सरकार सोही अनुरुपको सहकार्य गर्न तयार छ ।
म भन्न चाहन्छु– ‘योर च्वाइस इज फस्ट !’
Tagsकेपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा